Remote Media Manager Pro yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Kana zhizha rasvika, vagadziri vazhinji vanotanga kupa kwavo kunyorera mahara kwenguva yakati wandei. Nezuro takataura nezve Pro Recorder application iyo inotibvumidza kuti tinyore uye tinyore zvinyorwa zvedu zvekuteerera kunyorera pamusoro pekukwanisa kugadzirisa nekugadzirisa zvese zvakarekodhwa zvatinoita nechishandiso, sekunge yaive desktop desktop.
Ino nguva tichaenda kutaura nezve Remote Media Manager Pro, maneja wefaira uyo Iine mutengo wenguva dzose muApp Store ye3,99 euros asi kusvika mangwana, tichakwanisa kurodhaunirodha zvachose mahara. Remote Media Manager Pro, sekuratidzwa kwezita rayo, maneja faira anotibvumidza kufamba, kuteedzera, kutamba uye kuvhura mafaera pakati peNAS server, makomputa, maseva uye masevhisi ekuchengetedza gore.
Nekuda kwechikumbiro ichi hatizodi kuisa chero mamwe masevhisi atinowanzo shandisa kutarisa mafaera atakabata mugore. Ingomhanya iko kunyorera inozoongorora network yeWi-Fi kwatinobatanidzwa kutarisa kuti ndeapi masevhisi aripo panguva iyoyo uye ichatipa sarudzo dzakakodzera panguva iyoyo.
Remote Media Manager Pro inoenderana neMac, Windows, Linux, Nguva Capsule, NAS, WebDAv, iCloud, OneDrive, Dropbox, Bhokisi, uye Google Drive. Kutenda kune yakasanganiswa mutambi isu tichakwanisa kunakidzwa nemabhaisikopo atinawo mumasevhisi aya tisingafanirwe kudhawunirodha kune yedu kifaa. Inoenderana nemafomati .avi, .mkv, .wmv, .mpg, .mp4, .mov ...
Asi kana isu zvatiri kuda kuendesa ruzivo kubva kune imwe sevhisi kuenda kune imwe, ne Remote Media Manager Pro isu tinogona zvakare kuzviita mumasekondi mashoma, nekuda kwekutonga kuri nyore uye interface iyo ino faira manejimendi application inotipa. Remote Media Manager Pro inoda angangoita iOS 7.1 kana gare gare uye inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Remote Media Manager Pro yemahara kwenguva yakati wandei